Te hiasa hoanao manokana ve ? Natokana hoanao ity laha-tsoratra ity - 1er Pas - Transformez ce rêve en realité
Iza moa no tsy mba maniry an’izany hoe miasa hoan’ny tena izany? Vivre passion-ny? Ny olombelona tsirairay avy io dia samy manana ny nofinofiny kanefa dia vitsy no sahy manatanteraka izany noho ny PEUR, ka lasa mamorona akanga ts’amanorana rehetra izao ny saina: sao dia, sao dia… Raha ny tena marina ny fahafantaran-tsika hoe risque be, gidraka be izany m-réaliser rêve-ny izany no mahatonga antsika tsy sahy hanatanterak’azy. Fa dia aleo ny hery sy ny fahaizana no amidy amin’ny hafa mba ahafahany manatanteraka ny azy.
Be dia be ihany no efa nanatanteraka ny rêve-ny de aveo m abandonne. Karazan’olona ohatran’ireny no manakivy ny sasany i-realiser ny azy: »aza miditra amin’izany fa tantara be io… ». Sy ny hoe: « enao ve adala ny asa tsara io ka hoe hiala hiala ». Ka inona ary no fika 4 ahafahana manatanteraka izany rêve izany dia ny hoe: hiasa hoan’ny tena izany?
Assurer-o mialoha ny depense-nao isam-bolana
Raha mbola asa ihany no resahana dia ny miasa hoan’ny tena no ahitana a’izay satisfaction izay. Miala ny pression isan’andro ataon’ny sefo sy ny tompon’ny orin’asa. Ka noho izany zavatra izany dia alahim-panahy ny sasany hametra-pialana fa hanangana ny azy. Mila assurer-nao mialoha anefa izay depense-nao isan’andro izay. Raha tsy mbola tafarina anatiny 5 volana ny orin’asanao dia inona no hivelomanao? Eo no mahatonga ny sasany sady miasa orin’asa aloha no manao ansokosoko ny an’ny tena. ka rehefa mahita tataka dia iny lasa. Kanefa izay koa dia mbola mila fandinihina sao dia kil iray bebe vola no mahatonga anao mitsôka. Aleo aza kil 3 kely vola toy izay Kil iray be karama. Raha sendra miala tampoka io kil io na koa tara ny fandefasany karama dia inona no ataonao? Ka noho izany dia mila mieritreritra tsara sao dia ny nahazo ahy tamin’izany no ahazo anareo ka voatery niverina orin’asa indray aho.
Ny ankamaroan’olona m-réaliser ny nofinofiny dia vao sendra probleme iray dia Abandono! Abandono! Ity tany diavintsika ity dia tsy mba natao hanamora ny fiainan’ny zanak’olombelona fa anjarantsika no miady mba handresy. Ka esorina izay akiviana izay fa mila roso foana ny dia n’inona n’inona sakana eo. Tsy mila kivy. Araka nolazain’ny ranamana :
Sahia m-risque! Risque gagne, ze voa tsy miala maigna
Io no dingana voalohany indrindra tsy maintsy atrehan’olona hanatanteraka ny rêve. Ny ametraka demission izany gidraka zany. Manomboka eo dia anjaranao no andraisanao vola isam-bolana fa tsy hoe mody mandeha @ OSTIE raha kamo miasa de tonga ny faravolana dia mandray vola ihany. Raha vao tsy miasa ianao dia tsy hinan-kanina. Izay no ilàna ny plan B amin’ny fidiram-bola arak noresahko tery ambony ery iny mba tsy hogoavana be ny risque atrehana.
Araka noresahako matetika amin’olona izay tafahaona amiko hoe: « Je crois en Dieu et je crois en moi ».Ka n’inona n’inona zava-miseho eo dia ataovy ao an-tsaina foana hoe mino an’ito aho fa tsy maintsy tafa amin’ito. Ataovy ao an-tsaina foana fa tsy maintsy tafita ianao.
Izay indray aloha ny androany fa dia mirary soa.
Opportunité hoantsika ny fahantrana: Itsika samy itsika ihany dia afaka mamorona asa